ဒီတော့ဒီမှာ Porn ကသင့် ဦး နှောက်ကိုဘယ်လိုထိခိုက်သလဲ (podcast) - သင့် ဦး နှောက်က Porn On
ဒါကြောင့်ဒီနေရာမှာ Porn သင့်ဦးနှောက် (podcast) နှိပ်စက်တာကိုဘယ်လိုဖွင့်
ကျွန်မ (မ Fradd) အင်တာဗျူးဂယ်ရီ Wilson ကထဲကနေ YourBrainOnPorn.com အကြောင်းကို porn စွဲလျက်, naysayers ထံမှသူ၏လမ်းအများအပြားကန့်ကွက်ပစ်။ ကျနော်တို့ကိုလည်းစွဲလမ်း၏ neuroscience နှင့်မည်သို့ညစ်ညမ်းစာသားသင့်ဦးနှောက်ကိုပျက်စီးစေနိုင်ပါတယ်အကြောင်းအများကြီးထွက် geek ။
ပြီးခဲ့သည့်အပတ်ကငါခေါ်ထားတဲ့ဆောင်းပါးရေးသားခဲ့သည်, စောင့်ဆိုင်း, ပြည်သူ့အခုတော့ Porn တစ်ခုစွဲသည်မဟုတ်ဆိုကြသနည်း ဒါဟာအထဲကညစ်ညမ်းမကောင်းတဲ့သူ porn စွဲလမ်းမဖွစျနိုငျဟုနေကြသည်ထင်တဲ့သူတွေကိုရှိ-အပါအဝင် ပို. ပို. လူတို့အားတုံ့ပြန်ခဲ့သည်။ သင်စာမဖတ်ကြလျှင်, ယနေ့ငါရဲ့ Podcast တခုကိုနားထောင်ခြင်းမပြုမီကြောင်းပြုပါရန်သင့်အားတိုက်တွန်းပါသည်။
ဒီကနေ့ကြေညာချက်ကြီး နောက်ဆုံးတော့ငါ့ဘ ၀ ရဲ့အကြီးမားဆုံးပရောဂျက်ဖြစ်တဲ့အွန်လိုင်းဗီဒီယိုသင်တန်းနှစ်ခုကိုထုတ်ဖို့အဆင်သင့်ပဲ။ t.co/Q43ztwAWhh